ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို ကျောခိုင်းဖို့ လိုအပ်နေပြီလား
စိတ်ပျက်စရာလုပ်ငန်းခွင်က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲ
17 Sep 2018 . 5:41 PM
တစ်ခါတလေ ဘယ်လိုမှသည်းမခံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကို ကျိတ်မှိတ်လုပ်နေရတာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား။ ၀န်ထမ်းလုပ်လာတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ တစ်ခါတော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အနောက်မှာ မှီတွယ်နေတဲ့ မိသားစုတွေကို ငဲ့ရလို့၊ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ငွေအပိုမရှိလို့၊ နောက်အလုပ်သစ်တစ်ခုက အရံသင့်ရှိမနေလို့ အလုပ်ထွက်ချင်နေပေမယ့်လည်း ထွက်မရဘဲ စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ တ၀ဲလည်လည်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲလို့ ဆိုလိုက်ရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထွက်ချင်တဲ့အချိန် အလုပ်ထွက်နိုင်အောင်၊ စိတ်မပါတော့တဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုကို တွယ်ကပ်မနေရအောင် ကျွန်မတို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်က အခုကုမ္ပဏီမှာ ၀န်ထမ်းလုပ်နေပေမယ့် တခြားအလုပ်တွေလည်း တစ်ပြိုင်နက်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ရုံးကိုသွားပြီး အလုပ်လုပ်ရတာက တစ်နေ့မှာ ၈နာရီတည်းပါ။ ဥပမာ ကိုယ်က စာရင်းကိုင်ဆိုရင် တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စာရင်းတွေကိုလည်း Freelance လုပ်ကိုင်ပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ပြိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေကို အလုပ်လုပ်ပေးမိတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုးတယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ပြီး ၀ါသနာပါတဲ့တခြားအရာလေးတွေထပ်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေး ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်လေးတစ်ခုခုဖွင့်ရောင်းပြီး အပိုဝင်ငွေရှာပါ။ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိအလုပ်က ထွက်လိုက်တောင် နေ့စဉ်ဝင်ငွေအတွက် စိတ်ပူနေစရာများများစားစားမလိုအပ်တော့ပါဘူး။
Build your start up beside your full time job.
“မိုးရွာတုန်းရေခံ” ဆိုတဲ့စကားပုံလေးအတိုင်းပေါ့။ လက်ရှိမှာ ၀င်ငွေအတော်အသင့်လည်းရှိတယ်။ ပြင်ပအလုပ်လေးတွေကလည်း ပုံမှန်နေ့စဉ်ဝင်ငွေတစ်ခုကို ရှာနိုင်နေတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြည့်နေတာလဲ။ ငွေစုတော့လေ။ ကောင်းကောင်းစားတာ၊ ကောင်းကောင်းသုံးတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှစုထားဆောင်းထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်လည်ပတ်နေတဲ့ ငွေထုတ်စက်ကြီးကို ဘယ်လိုရပ်တန့်လို့ရမှာလဲ။ အဲဒီ့ငွေထုတ်စက်ကြီးက သင်ကိုယ်တိုင်ပါ။ သင်အနားယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နားလို့ရလောက်တဲ့အထိ အပိုငွေစုဆောင်းထားပါ။
နေတတ်စားတတ်အောင်လည်း လေ့ကျင့်ရပါဦးမယ်။ အရင်တုန်းက တစ်နေ့ဝင်ငွေ ငါးသောင်းရှိတယ်ပဲထား။ အခု မပျော်နိုင်တော့တဲ့အလုပ်က ထွက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ဝင်ငွေက ၂သောင်းပဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ၀င်ငွေကျသွားပေမယ့် သုံးငွေကိုပါ လိုက်ပြီးမလျှော့ချနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ မကြာခင် ၀င်ငွေထွက်ငွေမမျှတတဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဒဏ်ကို မခံချင်ရင် မပျော်တဲ့အလုပ်မှာဆက်လုပ်မလား ဒါမှမဟုတ် အသုံးစရိတ်ချွေတာပြီး နေတတ်စားတတ်အောင် လေ့ကျင့်မလား။ အဲဒီ့ နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်။
You must reduce your daily expense.
မပျော်တော့ပါဘူး။ စိတ်ညစ်လာပါပြီ။ ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူးချည်းပဲ ထိုင်အော်နေရုံနဲ့ ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ်ကလည်း နည်းနည်းအားစိုက်ပြီး လုပ်ငန်းနေရာသစ်ကို ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ပြီး ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့်နေရာလေးများရှိမလား။ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် နောက်ထပ် ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အသစ်တစ်ခုများရှိနေမလား ရှာဖွေလိုက်ပါ။ စိတ်ညစ်စရာလုပ်ငန်းခွင်မှာထိုင်နေပြီး မလုပ်ချင်ဘူးအော်နေရုံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Search for new opportunity.
အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုက အဆင်မပြေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို နှုတ်ဆက်မယ်ကြံလိုက်တိုင်းမှာ မိသားစုတွေက ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်မှာလဲဆိုပြီး နားလည်မှုမပေးဘဲ တားမြစ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်လုပ်လို့ရဖို့အတွက် မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကို ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို အပြုသဘောဆွေးနွေးပြောဆိုထားပါ။ ဒါမှသာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘာကြောင့် ဒါမျိုးလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတာကို သူတို့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနားလည်ပေးကြမှာပါ။
You must say your condition to family.
အဆင်မပြေတော့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ တစ်နာရီတောင် မရပ်တည်နေချင်တာကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုက ဘာကြောင့် “ဆုတ်လည်းစူး၊ စားလည်းရူး” ဖြစ်နေရတာလည်းဆိုရင်တော့ အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုအချက်တွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိလို့ပါပဲ။ အပေါ်ကအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အဖို့ စိတ်ကုန်စရာကောင်းတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုမှာ အချိန်အကြာကြီး ဒုက္ခခံနေစရာလိုအပ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။
စိတျပကျြစရာလုပျငနျးခှငျက ရုနျးထှကျနိုငျဖို့ ဘာတှလေိုအပျနတောလဲ
တဈခါတလေ ဘယျလိုမှသညျးမခံနိုငျတဲ့အလုပျတဈခုကို ကြိတျမှိတျလုပျနရေတာမြိုး ဖွဈဖူးပါသလား။ ဝနျထမျးလုပျလာတဲ့ ဘဝတဈလြှောကျမှာ တဈခါတော့ ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ အနောကျမှာ မှီတှယျနတေဲ့ မိသားစုတှကေို ငဲ့ရလို့၊ လကျဆုပျလကျကိုငျငှအေပိုမရှိလို့၊ နောကျအလုပျသဈတဈခုက အရံသင့်ရှိမနလေို့ အလုပျထှကျခငျြနပေမေယျ့လညျး ထှကျမရဘဲ စိတျဆငျးရဲနတေဲ့လုပျငနျးခှငျကွီးတဈခုထဲမှာ တဝဲလညျလညျလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါတှဟော ဘာကွောငျ့လဲလို့ ဆိုလိုကျရငျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမရှိလို့ဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျထှကျခငျြတဲ့အခြိနျ အလုပျထှကျနိုငျအောငျ၊ စိတျမပါတော့တဲ့အလုပျကွီးတဈခုကို တှယျကပျမနရေအောငျ ကြှနျမတို့ ကွိုတငျပွငျဆငျဖို့လိုအပျပါတယျနျော။
ကိုယျက အခုကုမ်ပဏီမှာ ဝနျထမျးလုပျနပေမေယျ့ တခွားအလုပျတှလေညျး တဈပွိုငျနကျလုပျလို့ရပါသေးတယျ။ ရုံးကိုသှားပွီး အလုပျလုပျရတာက တဈနမှေ့ာ ၈နာရီတညျးပါ။ ဥပမာ ကိုယျက စာရငျးကိုငျဆိုရငျ တခွားကုမ်ပဏီတှရေဲ့ စာရငျးတှကေိုလညျး Freelance လုပျကိုငျပေးတာမြိုးလုပျလို့ရပါတယျ။ ဒါတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ ပွိုငျဖကျကုမ်ပဏီတှကေို အလုပျလုပျပေးမိတာမြိုးဖွဈမှာဆိုးတယျဆိုလညျး ရပါတယျ။ လကျရှိလုပျနတေဲ့အလုပျအကိုငျမဟုတျဘဲ ကိုယျကြှမျးကငျြပွီး ဝါသနာပါတဲ့တခွားအရာလေးတှထေပျလုပျလို့ရပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးလေး ဒါမှမဟုတျ ဆိုငျလေးတဈခုခုဖှငျ့ရောငျးပွီး အပိုဝငျငှရှောပါ။ ဒီလိုလုပျမယျဆိုရငျတော့ လကျရှိအလုပျက ထှကျလိုကျတောငျ နစေ့ဉျဝငျငှအေတှကျ စိတျပူနစေရာမြားမြားစားစားမလိုအပျတော့ပါဘူး။
“မိုးရှာတုနျးရခေံ” ဆိုတဲ့စကားပုံလေးအတိုငျးပေါ့။ လကျရှိမှာ ဝငျငှအေတျောအသငျ့လညျးရှိတယျ။ ပွငျပအလုပျလေးတှကေလညျး ပုံမှနျနစေ့ဉျဝငျငှတေဈခုကို ရှာနိုငျနတေယျ။ ဒါဆိုရငျ ဘာကွညျ့နတောလဲ။ ငှစေုတော့လေ။ ကောငျးကောငျးစားတာ၊ ကောငျးကောငျးသုံးတာ ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှစုထားဆောငျးထားတာမရှိဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျလညျပတျနတေဲ့ ငှထေုတျစကျကွီးကို ဘယျလိုရပျတနျ့လို့ရမှာလဲ။ အဲဒီ့ငှထေုတျစကျကွီးက သငျကိုယျတိုငျပါ။ သငျအနားယူခငျြတယျဆိုရငျတော့ နားလို့ရလောကျတဲ့အထိ အပိုငှစေုဆောငျးထားပါ။
နတေတျစားတတျအောငျလညျး လကေ့ငျြ့ရပါဦးမယျ။ အရငျတုနျးက တဈနဝေ့ငျငှေ ငါးသောငျးရှိတယျပဲထား။ အခု မပြျောနိုငျတော့တဲ့အလုပျက ထှကျလိုကျတော့မယျဆိုရငျ တဈနဝေ့ငျငှကေ ၂သောငျးပဲ ဖွဈရငျဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဝငျငှကေသြှားပမေယျ့ သုံးငှကေိုပါ လိုကျပွီးမလြှော့ခနြိုငျဘူးဆိုရငျတော့ မကွာခငျ ဝငျငှထှေကျငှမေမြှတတဲ့ဒဏျကို အလူးအလဲခံရပါလိမျ့မယျ။ ဒီဒဏျကို မခံခငျြရငျ မပြျောတဲ့အလုပျမှာဆကျလုပျမလား ဒါမှမဟုတျ အသုံးစရိတျခြှတောပွီး နတေတျစားတတျအောငျ လကေ့ငျြ့မလား။ အဲဒီ့ နှဈခုထဲက တဈခုကိုရှေးခယျြရပါလိမျ့မယျ။
မပြျောတော့ပါဘူး။ စိတျညဈလာပါပွီ။ ဒီလုပျငနျးခှငျမှာ ဆကျမလုပျခငျြတော့ပါဘူးခညျြးပဲ ထိုငျအျောနရေုံနဲ့ ပွလေညျသှားမှာမဟုတျပါဘူးနျော။ ကိုယျကလညျး နညျးနညျးအားစိုကျပွီး လုပျငနျးနရောသဈကို ရှာဖှဖေို့လိုအပျပါတယျ။ မကျြစိဖှငျ့နားစှငျ့ပွီး ကိုယျနဲ့သငျ့တျောမယျ့နရောလေးမြားရှိမလား။ ကိုယျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးနဲ့ ကိုကျညီမယျ့ နောကျထပျ ကောငျးမှနျတဲ့လုပျငနျးခှငျအသဈတဈခုမြားရှိနမေလား ရှာဖှလေိုကျပါ။ စိတျညဈစရာလုပျငနျးခှငျမှာထိုငျနပွေီး မလုပျခငျြဘူးအျောနရေုံနဲ့တော့ ဘာမှဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး။
အရေးအကွီးဆုံးတဈခုက အဆငျမပွတေဲ့လုပျငနျးခှငျကို နှုတျဆကျမယျကွံလိုကျတိုငျးမှာ မိသားစုတှကေ ဘာလို့ ဒီလိုလုပျမှာလဲဆိုပွီး နားလညျမှုမပေးဘဲ တားမွဈကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့နားလညျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျလုပျခငျြရာကို စိတျအနှောငျ့အယှကျကငျးကငျလုပျလို့ရဖို့အတှကျ မိသားစုဝငျတှအေားလုံးကို ကိုယျခံစားနရေတဲ့ခံစားခကျြတှနေဲ့ အဆငျမပွမှေုတှကေို အပွုသဘောဆှေးနှေးပွောဆိုထားပါ။ ဒါမှသာ အပွောငျးအလဲတဈခုခုလုပျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျဘာကွောငျ့ ဒါမြိုးလုပျလိုကျတာလဲဆိုတာကို သူတို့ ကွညျကွညျဖွူဖွူနားလညျပေးကွမှာပါ။
အဆငျမပွတေော့တဲ့လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ တဈနာရီတောငျ မရပျတညျနခေငျြတာကို ကိုယျခငျြးစာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမြားစုက ဘာကွောငျ့ “ဆုတျလညျးစူး၊ စားလညျးရူး” ဖွဈနရေတာလညျးဆိုရငျတော့ အပျေါကပွောခဲ့သလိုအခကျြတှကေို ကွိုတငျပွငျဆငျထားမှုမရှိလို့ပါပဲ။ အပျေါကအခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့စုံနတေဲ့ဝနျထမျးတဈယောကျအဖို့ စိတျကုနျစရာကောငျးတဲ့အသိုငျးအဝိုငျးတဈခုမှာ အခြိနျအကွာကွီး ဒုက်ခခံနစေရာလိုအပျမှာ မဟုတျတော့ပါဘူးနျော။